Google Glass ကိုအကြောင်းလူကြိုက်များဒဏ္ဍာရီ debunks - သတင်း Rule
Google Glass ကိုအကြောင်းလူကြိုက်များဒဏ္ဍာရီ debunks
Google Glass ကို OOB အတွေ့အကြုံ 27126 (ဓာတ်ပုံအကြွေး: အ tedeyt)
လုပ်ခဲ့ပြီး Reality မျက်မှန် Google Glass ကိုမတရားဆက်ဆံခဲ့, သို့မဟုတ်ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်နာများထင်, နဲ့ Google ဟာ debunked သိရသည်ချိန်ခွင်လျှာအမှားကိုပြင်ဆင်ရန်မှ “ထိပ်တန်းဆယ်ပါးဒဏ္ဍာရီ” အဲ့ဒီအကြောင်း.
ဒဏ္ဍရီ 1 – Glass ကိုအစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှအဆုံးစွန်အာရုံဖြစ်ပါတယ်. Google ကအလိုအရ, “Glass ကို default အနေဖြင့်သာသင်ကဖြစ်လိုတဲ့အခါအပေါ်ကိုချွတ်သည်။” တစ်နည်းပြောရရင်တော့, ကသာကပေါ်မယ့်အခါ, အပေါ်င်ထို့ကြောင့်သင်တို့ကိုအာရုံမည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်မမဟုတ်လျှင်.
ဒဏ္ဍရီ2– Glass ကိုအပေါ်အမြဲဖြစ်ပြီးအရာအားလုံးမှတ်တမ်းတင်. Google ကပြောပါတယ်, “Glass ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသို့မဟုတ်ပင်အမြဲ-အပေါ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်စွမ်းသည်မဟုတ် (ဘက်ထရီကြာကြာထက်ကြာရှည်မည်မဟုတ် 45 မိနစ်ကတရားစွဲဆိုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်မပြုမီ).” အနီရောင်သညျထိုအလငျးသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုသော်လည်းရှိ၏မယ်ဆိုရင်ဒါဟာနေဆဲကောင်းတဲ့လိမ့်မည်, မလို?
ဒဏ္ဍရီ3– Glass ကို Explorer နည်းပညာကိုးကှယျ geeks များမှာ. Google ကယင်း၏ Explorer ကပြောပါတယ်, သို့မဟုတ် beta ကိုစမ်းသပ်သူများ, ပါဝင် “မိဘများ, မီးသတ်သမား, zookeepers, brewmasters, ရုပ်ရှင်ကျောင်းသားများကို, သတင်းထောက်များကို, နှင့်ဆရာဝန်များ။” ဒါဟာအစ Glass ကိုသူတို့ကိုလျော့နည်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုစေသည်ပြောဆိုထားသည် “သူတို့ကပိုထိထိရောက်ရောက်ကြောင့်သုံးနေတယ်သောကြောင့်,”. ကျနော်တို့တကယ်ကြေညာချက်၏စေရန်အဘယျအသေချာမင့်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းနှင့်မိဘလျှင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်, မီးသတ်သမား, zookeepers, brewmasters, ရုပ်ရှင်ကျောင်းသားများကို, သတင်းထောက်များကို, နှင့်ဆရာဝန်များပစ်လွှတ်နေ့၌တန်းစီအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်း.
ဒဏ္ဍရီ4– Glass ကိုချုပ်အချိန်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ. Google ကဒီရှေ့ပြေးပုံစံကိရိယာနှင့်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး “အနာဂတ်မှာ, ဒီနေ့ရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်ရယ်စရာကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ မိုဘိုင်းဖုန်း နှစ်လယ်ပိုင်း 80s မှ။” အဘယ်သူမျှမ, Google က. မအနာဂတျတှငျ, ယခု.
ဒဏ္ဍရီ 5: Glass ကိုမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုမ (နှင့်အခြားတွေ့နေရတယ်အမှုအရာ). Google ကမကပြောပါတယ်. ဒါကို, ကမ. မသေခြာဘူး.
ဒဏ္ဍရီ 6: Glass ကိုသင်၏မျက်စိဖုံးလွှမ်း(s ကို). Google က screen ကိုလက်ျာမျက်စိအထက်တကယ်ကပြောပါတယ်. ကျွန်တော် pedantic ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဦးရဲ့ပွောဆိုချင်ပါတယ် မျက်မှန်၏စုံတွဲ သင်တန်း၏ဒါကြောင့်မျက်စိကိုဖုံးလွှမ်း, ငါတို့မူကားမ.
ဒဏ္ဍရီ7– Glass ကိုပြီးပြည့်စုံသောစောင့်ကြည့်ကိရိယာ. Google ကဒီဆိုးဆိုးရွားရွားရသည်မှာထိုမှရှာတွေ့ပုံ. ဒါဟာကပြောပါတယ်, “တစ်စုံတစ်ဦးကလျှို့ဝှက်စွာသင်မှတ်တမ်းတင်ဖို့လိုလျှင်, အများကြီးရှိပါတယ်, ထွက်ရှိပါတယ်သင်သည်သင်၏မျက်နှာပေါ်မှာသိသိသာသာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်သင်တို့ကိုအသံတစ်သံ command ကိုပေးအခါတိုင်းတက်ထွန်းတဦးတည်းထက်အများကြီးပိုကောင်းကင်မရာများ, သို့မဟုတ်တစ် button ကိုနှိပ်ပါ။” တရားပါတယ်.
ဒဏ္ဍရီ 8 – Glass ကိုသာတတ်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အခွင့်ထူးခံသောသူတို့သည်အဘို့ဖြစ်၏. အချော device ကိုပစ္စုပ္ပန်ထက်သိသိသာသာလျော့နည်းကုန်ကျလိမ့်မည်ဟုကောလာဟလများရှိပါတယ် $1,500 စျေးနှုန်း. သို့သော် Google သည်အချို့သော Kickstarter ကနှင့် Indiegogo ကနေတဆင့်ဝယ်ဖို့ငွေကိုထမွောကျကပြောပါတယ်. ဘာ, အမှန်? ကျနော်တို့ရုံးသစ်ကိုရေခဲသေတ္တာများအတွက်ပိုက်ဆံပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့.
ဒဏ္ဍရီ9– Glass ကိုပိတ်ပင်ခဲ့သည်… ခပ်သိမ်းသောအရပ်တို့၌. Google ကသတိပေးခဲ့သည်, “ရုံစိတျထဲမှာကိုခံရ, -လိမ့်မယ်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ: Glass ကိုဆေးညွှန်းမှန်ဘီလူးမှပူးတွဲပါနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ပိတ်ထားခံရဖို့ Glass ကိုလိုအပ်ဖြစ်နိုင်လူ Locker အခန်း၌ဆင်ကန်းတောတိုးအကြောင်းကိုထိ မိ. လဲထားခြင်းထက်အများကြီးပိုမိုလုံခြုံပါသည်။” ကျွန်တော်တို့ပြီးသားလူကားမောင်းနေစဉ် Glass ကိုဝတ်ဆင်ထားဘို့ဖမ်းဆီးရုပ်ရှင်မူပိုင်ခွင့်များအတွက် FBI ကကျင်းပခဲ့ခံရဖူးပါတယ်ကြောင်းပေးထား, ကြှနျုပျတို့သညျသှားဖို့ရှည်လျားသောလမ်းရရှိပါသည်.
ဒဏ္ဍရီ 10 – Glass ကို privacy ကို၏အဆုံးခြေတစ်လှမ်း. Google ကလူကင်မရာများထင်ထဲကထောက်ပြ, ဗီဒီယိုကင်မရာများနှင့်ဆဲလ်ဖုန်းအားလုံး privacy ကို၏အဆုံးအချက်ပြ, ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့, သူတို့သည်လည်းအမြားအဖြစ်လာခဲ့သည်တခါ, အစိုးရိမ်ချသေဆုံး. ဒီနောက်ဆုံးအချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏ အရာ၏အင်တာနက်ကို အငြင်းအခုန်.
အဆိုပါ Inquirer ဝတ်ဆင်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် powering ကြောင်းအရာများကိုအင်တာနက်များ၏မြင့်တက်အပေါ်တစ်ဦးအငြင်းအခုန်ယခုအပတ်ပြေးနေသည်. ကျနော်တို့အမှုအရာများကိုအင်တာနက် privacy ကိုသတျပါလိမျ့မညျရှိမရှိပေါ်တွင်သင်၏အမြင်များကိုနားထောငျချင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်စမတ်က devices စုဆောင်း user data ကိုလုံလောက်စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ရှိမရှိ.
24707	0 လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန်, Google က, Google Glass ကို, Indiegogo, Kickstarter က, မိုဘိုင်းဖုန်း, Project Glass, စောင့်ကြည့်ခြင်း
← ဘယ်လိုအာကာသယာဉ်မှူးအာကာသအတွင်းသံတမန်ရေးအရတင်းမာမှုတွေဆက်လက်ရှင်သန် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုသူခိုးမဖြစ် →